ပွီးပွညျ့စုံသော Relationship တဈခုမှာ သာတယျနာတယျဆိုတာ မရှိဘူး - ONE DAILY MEDIA
ပွီးပွညျ့စုံသော Relationship တဈခုမှာ သာတယျနာတယျဆိုတာ မရှိဘူး…
ပွီးပွညျ့စုံသော Relationship တဈခုမှာ သာတယျနာတယျဆိုတာ မရှိဘူး ပွီးတော့ ယောကျြားဖွဈမှ မိနျးမဖွဈမှဆိုတဲ့ လိငျကှဲပွာမှုလညျး မရှိဘူး ။ ကိုယျသငျ့တျောမယျထငျပွီး ရှေးခယျြလိုကျတဲ့ အခဈြတဈခုမှာ ရုပျခြောတာ ရုပျမခြောတာ မရှိဘူး ကိုယျ ခဈြနရေငျ နူးနူး ဝဲဝဲ ခဈြနဖေို့သာ အဓိက ။
ကိုယျဘဝရဲ့ လကျတှဲဖျောက ဘယျလိုလူစားမြိုးလဲ…?
အနုပညာသမားလား ဂီတသမားလား ဆရာဝနျလား စဈဗိုလျလား အထကျလူတနျးစားလား စသညျ့အားဖွငျ့ ဥပမာ .. အနုပညာသမားတဈယောကျကို လကျတှဲဖျောအဖွဈ ရှေးခယျြတော့မယျဆိုရငျ သူခဈြတဲ့ အနုပညာကိုလဲ ကိုယျ့ဘကျက အတတျနိုငျဆုံး ခဈြပေးနိုငျရမယျ ၊ ပွီးတော့….. သူ့ ပရိတျသတျတှကေိုလညျး ကိုယျဘကျက အပွဈမမွငျပဲ ခဈြခငျပေးရမယျ ။ ဟငျ့အငျး .. ငါက သူ့ကိုဘဲ ခဈြတာ သူ့အနုပညာ သူ့ပရိသတျတှကေိုတော့ မခဈြနိုငျ နားလညျမပေးနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ ကိုယျတညျဆောကျခဲ့တဲ့ Relationship က ရရှေညျ ခိုငျမွဲဖို့ဆိုတာ ဝေးကှာသှားစတေယျ ။
တကယျတော့ .. အခဈြတဈခုမှာ လိုအပျခကျြဆိုတာ မရှိပါဘူး သူ့ခဈြတာကို ကိုယျဘကျက အကွှငျးမဲ့ ယုံကွညျပေးသလို ကိုယျခဈြတာကိုလညျး သူ့ဘကျက အကွှငျးမဲ့ ယုံကွညျပေးနဖေို့ပါပဲ ။ ကိုယျ့ခဈြသူဟာ ဘယျလိုလူစားမြိုးလဲဆိုတာ ကာယကံရှငျ ကိုယျတိုငျးက ပိုအသိဆုံးနမှောပါ ။ ဒီတော့ .. ကိုယျ့ဘကျက မပွတျသားနိုငျသေးသ၍ ခဈြတဲ့သူအပျေါမှာ သံသယတှေ နားလညျမှုတှေ မရှိဘဲ မယုံသင်ျကာဖွဈနမေဲ့အစား ၊ သူ့ကို ကိုယျ့ဘဝရဲ့ လကျတှဲဖျောအဖွဈ ခံယူထားတယျဆိုရငျ သူ့ဂုဏျသိက်ခာ ကိုယျကငျြ့တရားတှကေို အပျေါယံ အမွငျတှနေဲ့ အထငျမလှဲပဲ ယုံကွညျပေးစခေငျြတယျ ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အပွနျအလှနျ ယုံယုံကွညျကွညျ နားလညျမှု သစ်စာတရားတှနေဲ့ သံသယကငျးကငျး ခဈြကွမယျဆိုရငျ ၊ ခိုငျမွဲအောငျတညျဆောကျခဲ့တဲ့ Relationship မှာ ကွားလူတှေ ဘယျလို နှောကျယှကျနှောကျယှကျ မနာလိုသူတှေ ဘယျလို နညျးနဲ့ သှေးခှဲခှဲ ပွိုလဲသှားမှာ မဟုတျပါဘူး ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ဘကျက မမုနျးနိုငျ မမနေို့ငျဘူးဆိုရငျ မာနတှကေို သံသယတှနေဲ့ တငျးခံထားပါနဲ့ တငျးလှနျးရငျ ပွတျတယျဆိုတာ ” ကွိုး ” ဘဲ ကောငျးပါတယျ ။ ခဈြတဲ့သူတိုငျး ခိုငျမွဲသော InaRelationship တဈခု တညျဆောကျနိုငျပါစေ…..”
ပြီးပြည့်စုံသော Relationship တစ်ခုမှာ သာတယ်နာတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး…
ပြီးပြည့်စုံသော Relationship တစ်ခုမှာ သာတယ်နာတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး ပြီးတော့ ယောကျာ်းဖြစ်မှ မိန်းမဖြစ်မှဆိုတဲ့ လိင်ကွဲပြာမှုလည်း မရှိဘူး ။ ကိုယ်သင့်တော်မယ်ထင်ပြီး ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အချစ်တစ်ခုမှာ ရုပ်ချောတာ ရုပ်မချောတာ မရှိဘူး ကိုယ် ချစ်နေရင် နူးနူး ဝဲဝဲ ချစ်နေဖို့သာ အဓိက ။
ကိုယ်ဘဝရဲ့ လက်တွဲဖော်က ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ…?
အနုပညာသမားလား ဂီတသမားလား ဆရာဝန်လား စစ်ဗိုလ်လား အထက်လူတန်းစားလား စသည့်အားဖြင့် ဥပမာ .. အနုပညာသမားတစ်ယောက်ကို လက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် သူချစ်တဲ့ အနုပညာကိုလဲ ကိုယ့်ဘက်က အတတ်နိုင်ဆုံး ချစ်ပေးနိုင်ရမယ် ၊ ပြီးတော့….. သူ့ ပရိတ်သတ်တွေကိုလည်း ကိုယ်ဘက်က အပြစ်မမြင်ပဲ ချစ်ခင်ပေးရမယ် ။ ဟင့်အင်း .. ငါက သူ့ကိုဘဲ ချစ်တာ သူ့အနုပညာ သူ့ပရိသတ်တွေကိုတော့ မချစ်နိုင် နားလည်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Relationship က ရေရှည် ခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာ ဝေးကွာသွားစေတယ် ။
တကယ်တော့ .. အချစ်တစ်ခုမှာ လိုအပ်ချက်ဆိုတာ မရှိပါဘူး သူ့ချစ်တာကို ကိုယ်ဘက်က အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပေးသလို ကိုယ်ချစ်တာကိုလည်း သူ့ဘက်က အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပေးနေဖို့ပါပဲ ။ ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်းက ပိုအသိဆုံးနေမှာပါ ။ ဒီတော့ .. ကိုယ့်ဘက်က မပြတ်သားနိုင်သေးသ၍ ချစ်တဲ့သူအပေါ်မှာ သံသယတွေ နားလည်မှုတွေ မရှိဘဲ မယုံသင်္ကာဖြစ်နေမဲ့အစား ၊ သူ့ကို ကိုယ့်ဘဝရဲ့ လက်တွဲဖော်အဖြစ် ခံယူထားတယ်ဆိုရင် သူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို အပေါ်ယံ အမြင်တွေနဲ့ အထင်မလွဲပဲ ယုံကြည်ပေးစေချင်တယ် ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ယုံယုံကြည်ကြည် နားလည်မှု သစ္စာတရားတွေနဲ့ သံသယကင်းကင်း ချစ်ကြမယ်ဆိုရင် ၊ ခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Relationship မှာ ကြားလူတွေ ဘယ်လို နှောက်ယှက်နှောက်ယှက် မနာလိုသူတွေ ဘယ်လို နည်းနဲ့ သွေးခွဲခွဲ ပြိုလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘက်က မမုန်းနိုင် မမေ့နိုင်ဘူးဆိုရင် မာနတွေကို သံသယတွေနဲ့ တင်းခံထားပါနဲ့ တင်းလွန်းရင် ပြတ်တယ်ဆိုတာ ” ကြိုး ” ဘဲ ကောင်းပါတယ် ။ ချစ်တဲ့သူတိုင်း ခိုင်မြဲသော InaRelationship တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ…..”